Wararka - Soo bandhig dhowr tilmaamood oo caadi ah oo ku saabsan ilaalinta degmada
Warqadani waxay soo bandhigaysaa dhowr tilmaamood oo guud oo ku saabsan ilaalinta degmada si loo fududeeyo xulashada tilmaamo ku habboon iyadoo loo eegayo deegaan kala duwan.
Dhererka hal gabal oo ka mid ah tareenada degmada ayaa guud ahaan go'an. Tareen kasta oo ilaaliya dhererkiisu waa 3 mitir wuxuuna leeyahay 12 tuubbo oo yaryar oo toosan. Tiirka wuxuu qaataa 80 * 80mm tuubo laba jibaaran, markaa dhererka go'an waa 3.08m. Farqiga u dhexeeya qeexitaanno kala duwan ayaa ah inta badan dhererka dariiqa ilaalinta degmada. Dhererka halkan waxa uu tilmaamayaa dhererka sare ee tiirka ilaa dhulka ka dib marka biraha la rakibo. Dhererka soo socda ayaa caadi ahaan loo isticmaalaa:
Dhererka 0.6m tareen waa 0.3m, kaas oo inta badan loo isticmaalo albaabada iyo meelaha ka baxa garaashyada iyo xarumaha laga dukaamaysto.
Dhererka 0.8m ee ilaalinta waa 0.5m, kaas oo loo qaybin karo goobo aqoon-is-weydaarsi iyo aqoon-is-weydaarsi.
Dhererka 1.0m birta ilaalintu waa 0.7m. Tilmaantan waxaa inta badan loo isticmaalaa waddooyinka bulshooyinka, dugsiyada iyo jardiinooyinka.
Dhererka 1.2m birta ilaalintu waa 0.9m. Waxaa inta badan loo adeegsadaa waddooyinka dowladda hoose iyo waddooyinka magaalada si looga ilaaliyo dadka lugeynaya inay is gooyaan oo ay xiraan nalalka waddooyinka iska soo horjeeda.
Maxaa loo baahan yahay in fiiro gaar ah loo yeesho rakibaadda waardiyaha ee injineernimada buundada
Inta lagu jiro dhismaha ilaalinta buundada, waxaa lagama maarmaan ah in si sax ah loo fahmo xogta xarumaha kala duwan, gaar ahaan goobta saxda ah ee dhuumaha kala duwan ee ku aasan dhulka hoostiisa. Lama ogola in ay waxyeelo u geysato tas-hiilaadka dhulka hoostiisa ah inta lagu jiro habka dhismaha. Marka tiirka aad loo sii wado, tiirka looma soo bixin si loo saxo. Aasaaskeeda waa in mar kale la dhufto ka hor wadida, ama booska tiirka waa in la hagaajiyaa. Marka la soo dhawaado qoto dheer inta lagu jiro dhismaha, xoogga dubbe waa in la xakameeyo.
Marka laga reebo in xidhidhka iyo boolal-ballaadhintu ay yihiin galvanized-kulul, qaybaha kale ee ilaalinta buundada waa in la galvanized-kulul ka hor dahaarka caagga ah. Xariiqda dhibicda leh ee shaxanka waa foorarsiga saxanka isku xirka. Iska caabinta dhulka ee shabagga shayga soo dhacaya ayaa loo baahan yahay inuu ka yaraado 10. Haddii ay ku guuldareysato inay buuxiso shuruudaha, qadarka birta xagasha ee jirka dhulka ayaa la kordhin karaa. Fogaanta birta xagasha waa 5M waxayna ku xiran tahay birta siman. Marka dhamaadka shabagga shay kasta oo lid ku ah uu dhulka dhigo, qallafsanaanta deegaanka iyo dhererka birta xagasha waa in ay hoos yimaadaan tirada dhabta ah ee goobta.
Ilaalinta buundada waa mashruuca rakibaadda buundada iyo tas-hiilaadka waddooyinka iyo qayb muhiim ah oo ka mid ah tayada muuqaalka buundada iyo waddada weyn. Tayada gudaha ee ilaalinta buundada ka-hortagga isku dhaca waxay ku jirtaa agabka ceeriin iyo habka farsamaynta, tayada muuqaalkeeduna waxay ku xidhan tahay habka dhismaha. Inta lagu jiro dhismaha, waa in aan fiiro gaar ah u leh isku-dar ah diyaarinta dhismaha iyo darawalka raso, si joogto ah u soo koobaan waayo-aragnimada iyo xoojinta maamulka dhismaha, si loo hubiyo in tayada rakibaadda ee alwaax ka hortagga isku dhaca buundada guardrail.
Waxaan kuu habayn karnaa muunado si aad u hubiso
Waqtiga boostada: Oct-15-2021